PressReader - Isolezwe lesiXhosa: 2018-10-25 - Masihleke
Isolezwe lesiXhosa - 2018-10-25 - IINDABA - MANONO MDLAZI
MAKE sibhideni uHerode bantase! UYesu wazalelwa kwisibhedlele iDora Nginza, kwatsho izazi ezazivela eNorth West, waze wayokufihlwa kwiiNtaba zoKhahlamba ngomasikhenkethe, pewu! hayi masiyekeni kanene anazi nto ngebhayibhile, ndibona ukujama oku kwabanye, kukho abangazi kwaYesu lowo abafana naba abagqibela ngo1985 ecaweni njengobhut’ Mahlubonke.
Inokuba niyazibuza kutheni ndiyazi kangaka ibhayibhile?
Ewe bantase, ndingokhethiweyo kaloku mna eZulwini, kulant’ba bendike ndanibuza ukuba nanike nayombona uYesu emveni kokubethelelwa nokuvuka kwakhe eZulwini, niyakhumbula ndinibuza?
Anandiphendula. Mna ke kule mpelaveki siphuma kuyo bendiyokundwendwela uYesu wam eMazulwini. Bendihamba ngeVeco kaBaw’uDlamini kuba iyeyona inkulu. Kaloku bendilayishe neebhegi zam zezono, bendiyozishiya eZulwini, ndidikwe kukuphathisa imithwalo, ndaqonda mandizihambisele ngokwam.
Yile nto ke ndibuye ndikholiwe kuba ndifike ndakhetha iNkosi ententeni yapha, ndazalwa ngokutsha. Eza zono zam bezigcwele umasikhenkethe, ndifike ndazithi diii phambi koBawo. Ndambona ezithatha eyokuzitshisa.
Ndithetha nani nje bantase nithetha nos’Nohombile omtsha, osindisiweyo. Sendicinge ukuba ndiyenze ishishini ke le yokuthutha izono nemithandazo yabantu ngeQuantam okanye iVeco, ndizise eZulwini.
Bantase andithi siyazi bakhona abo bangazithembanga xa bethandaza, abanokucinga ukuba umthandazo wabo awuphumeli nangaphaya kophahla lwendlu kuba benezolo ezininzi?
Mna ke ndiqonde mandinihambisele ngoku kwam le mithandazo yenu, niyiqokelele ke niyifake koomasikhenkethe. Yonke nje into oyicelayo noyidingayo uyifake phaya, mna nanjengamntu osele eyazi le ndlela eya eZulwini ndiza kunihambisela yona kunye nezo zono zenu. Xa zininzi ungaziphungula ndiza kufike ndizibeke phambi koBawo ayokuzitshisa.
Kanti shem andibizi tu, ibhegi nganye liwaka, kanti naxa ungenamali siyabonisana us’ke ubhatale kancinci kancinci. Bantase ndiyakwazi ukuxakeka, nam ndandike ndaxakeka.
Kuza kubamnandi niza kubona, akukho namnye ngoku oza kulinda impendulo yomthandazo angawaziyo nokuba ufikile okanye zange ufike kuBawo.
Kanti xa ninokundinika imali yehotele ndingade ndilale, ndizilinde iimpendulo zenu, ndibuye emva kweentsuku ezisixhenxe, sendibuya nazo.